ဒီနေ့တော့ နာဂိုယာပာာ ဆောင်းတွင်းမို့ အေးစက်စက်ပေမယ့် လေမတိုက်နေလို့ နေလို့ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ...
၂၀၁၆ နှစ်သစ်စတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလှူဒါန်းချင်တဲ့စိတ်ပာာ ဒီနေ့မှဘဲ အထမြောက်ခဲ့ပါတယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား ဆွမ်းကပ် ဘုန်းကြီးပြန်စွန့်တဲ့ ပာင်းများနဲ့ အဝအပြဲ ပြန်လည်စားသောက်ခဲ့ပါတယ်😀😀
ဘုန်းဘုန်းပောာပြောပေးတဲ့ တရားနာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့အား ၃၁ ဘုံကျင်လည်
ကြကုန်သော လူနတ်ဗြပ္မာာသတ္တဝါ အပေါင်းတို့အား အမျှပြန်လည်ပေးဝေခဲ့ပါတယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆီကလည်း ဂျပန်ဆဘ ငါးနဲ့ ငါးငပိချက် ချက်နည်းသင်ခဲ့သေးတယ်
နာဂိုယာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ သုံးမှတ်တိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ စေတီလေးနဲ့ ဓမ္မာရုံကိုလည်းသွားခဲ့တယ်
အပြန် ဘတ်စ်ကားနဲ့ ကာနယမ ကို သွား ကားဂိတ်က ဒိုးနတ် ဆိုင်ရှေ့တည့်တည့်ရပ်ရော ဒိုးနတ်စားချင်စိတ်တွေပာာ တစ်ဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာတာ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကြည့်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံဆိုလို့ အကြွေလေးတွေသာရှိတယ် ခုနက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတုန်းက အိတ်ထဲရှိတဲ့ အရွက်လေးတွေလှူခဲ့သေးတာကိုး
ကဲဒါနဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ATM လိုက်ရှာ ပိုက်ဆံထုတ် ဒိုးနတ်ဆိုင်သွား မုန့်စားပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ လေပေါလိုက်တာ နှစ်နာရီလောက်ကြာသွားတယ်
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက ဆွယ်တာနဲ့ မြို့ထဲသွား ပိာုကြည့်ဒီကြည့် ပိာုဝယ်ဒီဝယ်
မြို့ထဲလမ်းတွေမှာ မီးတွေ အလှဆင်ထားတာ လှလိုက်တာ
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပြန်တယ်
Posted by Mya at 7:44 AM No comments:
သူတို့ပြောတဲ့ ရှင်းနန်းကိုင်းသွားတယ်...သိပ်နောက်ကျတဲ့ ရှင်းနန်းကိုင်းဘဲကွယ်... ဇန်န၀ါရီလတောင်ကုန်တော့မှာကိုး... အီကဲဘန အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရှင်းနန်းကိုင်းဆိုတော့ ပန်းအကြောင်းတွေပြောတယ်... ဂျပန်လိုတွေပြောတယ်.... တစ်နာရီလောက်ကြာတယ်.... အီတလီက ပြခန်းတစ်ခုရဲ့ ပန်းချီကားတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ပန်းတွေ..... ဗီနပ်စ် လည်းပါတယ်... ကျုးပစ်ဒ်လည်းပါတယ်.... နားလည်လိုက် နားမလည်လိုက်.... နားမလည်တာတွေဖြစ်ညှစ်နားထောင်လို့ထင်တယ်.... ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်.... အခန်းထဲက လူတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်.... တစ်ချို့အိပ်ငိုက်နေကြတယ်.... အိပ်ငိုက်တဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီး အိပ်ငိုက်နည်းနည်းပြေသွားတယ်.... နောက်တော့ ကမ်းပိုက်လုပ်တယ်.... ၀ိုင်အဖြူ.... ယဉ်ကျေးမှုအရ တစ်ငုံလေးသောက် ကမ်းပိုက်တာတောင် ခဏနေတော့ ခေါင်းကကိုက်တယ်.... ဟင်းတွေက သိပ်လှတာဘဲ...ဟုတ်တယ် သိပ်လှတာဘဲလို့ဘဲပြောရမယ်.... အရသာမှမရှိတာ..ကိုယ်တော့ အဲလိုထင်တာဘဲ... အားလုံးကလှတယ်... အားလုံးကို ကုန်အောင်စားတယ်.... ကုန်အောင်မစားရင် သိပ်ရိုင်းတယ်ဆိုလို့ အားလုံးကုန်အောင်စားတယ်.... အခုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားပြီ.... နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်... လေတွေပေါ.. ဘေးနားက ကီမိုနိုဝတ်အမျိုးသမီးက မြန်မာပြည်လာရင် ဘယ်သွားရမလဲတဲ့... စိတ်ဝင်စားစရာနေရာရှိလားတဲ့.... မေးမှမေးရက်ကွယ်.... ရွှေတိဂုံ.... ပုဂံ... ဓာတ်ပုံတွေရှာပြီး ပြလိုက်တယ်.... သူက ခဏလေး ခဏလေးဆိုပြီး အိပ်ထဲက စာအုပ်လေးထုတ် နာမည်တွေမှတ်တယ်.... နောက်တော့ မဲတွေဖောက်နေတယ်.... ထင်တဲ့ အတိုင်းမပေါက်ဘူး...ဟဟ.... ကိုယ့်ရှေ့က နံပါတ်... ကိုယ့်နောက်က နံပါတ်.. အကုန်ပေါက်တယ်... အို..ဒါမျိုးတွေက ဖြစ်နေကျ...သူငယ်ချင်းက မဲပေါက်တာ... မြင်းရုပ်လေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေး ဒီနှစ်က မြင်းနှစ်တဲ့... ဂျပန်လိုတော့ မြင်းကို ဥမတဲ့... သူတို့မှာ ဥမခု ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်.... တစ်ခုခုကို ဥမခုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ.... ဟင်းတွေဘာတွေချက်ကျွေးလို့ ဥမအိ ဥမအိ ဆိုလည်း သိပ်အရသာရှိတယ်ပေါ့.... အဲဒီ အသံထွက်နဲ့တူတဲ့.. ဥမ ....မြင်းနှစ်...ဒီနှစ်က ကောင်းတယ်တဲ့.... ပြန်လာတော့ အေးလိုက်တာ.... အေးပြီဆိုရင်လေက စွတ်တိုက်.... သိပ်စိတ်တိုတာဘဲ... လက်အိတ်က မေ့ခဲ့လို့ ကုတ်အကျီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်ထားပါတယ် ဆိုမှ.... လေတိုက်ပြီး ကုတ်အကျီင်္က လန်လန်တက်နေလို့ လက်ကို ထုတ်ပြီး ဆွဲချနေရတယ်.... တိုက်နေတဲ့ လေ.... ပွနေတဲ့ ဆံပင်... စိတ်ကတိုလာတယ်.... တူတူအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး ဘဲနဲ့ ပါသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်းစိတ်တိုချင်တယ်.... ညနေတွေ့မယ် မုန့်သွားစားမယ် ဆိုပြီး တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထွက်သွားလိုက်တဲ့ သူကိုလည်း စိတ်ကတော်တော်ကိုတိုတယ်..... အွန်လိုင်းတွေ့ရင် ဟိုင်းလောက်က လွဲပြီး ပြောစရာ မရှိတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လည်း မတော်တဆ တစ်ခါတစ်လေတောင် သတိမရချင်တော့ဘူး... အဲဒါကတော့ စိတ်တိုတာထက်ပိုတဲ့ စိတ်ကုန်ခြင်း...... အိမ်ပြန်လာ အိပ်နေပြီး မနက်ဖြန်အတွက်စာ မပြီးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစိတ်တိုတယ်... အခုလည်းစာမလုပ်ဘဲ ဖဘ တက်စာရေးနေလို့ ပိုပိုပြီး စ်ိတ်တိုတယ်.....
Posted by Mya at 4:50 AM No comments:
တော်တော်ကြီးဖုန်တက်နေတဲ့ စာမျက်နှာလေးကို အလည်ပြန်လာမိတယ်… အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်ပေါ့ အကြာကြီးပစ်ထားမိတယ်….
ကဲ ဒီနေ့ချက်တဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအကြောင်းပြောပြမယ်……
(ကျွန်မ ဂျပန်က ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်နေတယ်….)
ကျွန်မနေ့တိုင်းလာရတဲ့ သုတေသနခန်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်က‌အရင်အပတ်က‌ပြောတယ်…. နင်တို့နိုင်ငံမှာ coconut noodle ကိုမနက်စာစားတယ်ဆို တဲ့ သူ့ monitor screen ကိုကြည့်ရင်းပြောတယ်… သူအင်တာနက်မှာကြည့်နေရင်း လှမ်း‌ပြောတာ….
Coconut ramen ဘယ်လိုများပါလိမ့်နော်တဲ့ ရာမန် ဆိုတာ ခေါက်ဆွဲကို ဂျပန်လိုခေါ်တာပါ… အဲဒါနဲ့ ငါချက်ယူလာမယ် တစ်ခေါက်လောက်စားကြည့်ကြပါလား ဆိုပြီး ဒီနေ့တော့ ကြိုးစားပြီးချက်လာခဲ့တယ်……. နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ရတာ ဟင်းတော်တော်ချက်စားဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်…. လက်ရာတွေကတော့ အတော်ကိုတိုးတက်လာတယ်… ကိုယ့်ဘာသာတော့ ဒီလိုထင်တာပါဘဲ….
Lab က ကလေးများတော့ စားပြီး အရသာရှိတယ်… တော်တော်များများကတော့ အိုအိရှိ (oishii) တဲ့ ….
အုမအိ (umai) လို့တော့ မ‌ပြောကြ….အုမအိဆိုတာ သူတို့ဗန်းစကားလို ဖြစ်မယ်… အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကြရင်‌ပြောသလိုပါဘဲ…..
တစ်ယောက်ကတော့ သူတို့တွေက coconut ကိုစားလေ့မရှိတော့ နင်က coconut ‌ပြောလို့သာတဲ့ ဘယ်အရသာက coconut ရဲ့ အရသာဆိုတာ သိပ်နားမလည်ဘူးတဲ့…. ကြက်သားနဲ့ ကြက်ဥတွေနဲ့ ဆိုတော့ ကြက်သားရာမန်လို့တောင် ခေါ်ချင်သေးတယ်တဲ့ ဟဟ….
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ချက်ကျွေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ တကယ်လည်းချက်ဖြစ်သွားတော့ ကောင်းပါတယ်…. ကျွန်မလည်းမနက်က တစ်ပွဲ ခုနက လက်ကျန်ရှင်းတာလေးနဲ့ သွေးလေးပြီး အခုတော့ အိပ်ငိုက်နေသည်…..
Posted by Mya at 1:55 AM No comments:
နာဂိုယာ ဒိုင်ယာရီ (၁)
ဒီနေ့တော့ နောက်ထပ် မတ်ဆုမိုတိုစံ နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်… ဘ၀မှာ ပထမသိရတဲ့ မတ်ဆုမိုတိုစံ က ကျောင်းကလုပ်တဲ့ conference ကိုလာတတ်တဲ့ tokyo, waseda တက္ကသိုလ်က ပရော်ဖက်ဆာ ဆရာကြီးပေါ့… စာတမ်းဖတ်ပွဲအပြီး ကျောင်းက နိုင်ငံခြားသားတွေ ရွှေတိဂုံ ဘုရားလိုက်ပို့တော့ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်ဖို့ ဆရာ့ကို ရွှေဆိုင်းတွေ ၀ယ်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်…
အဲဒီနေ့က စကော့ဈေးမှာကိုရီးယား ကဆရာတစ်ယောက်က ပတ္တ့မြားလက်စွပ် ၀ယ်တော့ ဆရာက တို့ဂျပန်တွေက နိုင်ငံက ချမ်းသာပေမယ့် တို့လူမျိုးတွေက ဆင်းရဲပါတယ်ကွာ… မ၀ယ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ … မွန်ဘူးရှိုး စကော်လာရပြီး သွားချင်ခဲ့တာ … ဆရာ့လဘ်ကိုပါ… ကံဆိုးစွာဘဲ… မေးလ်ပို့တဲ့ အချိန်မှာ လိပ်စာလွဲနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း private university ထက်စာရင် national university ကိုဘဲသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့် မသွားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့… ဒီလိုနဲ့ဘဲ အီရှိဘရှိဆန်းဆေး လဘ်ကို မျက်စိလည် လမ်းမှား လွဲချော်ပြီး ရောက်ခဲ့တာကလား…. အခု အသိအစ်မတွေထဲက တစ်ယောက် ဆရာ့လဘ်မှာရောက်ပြီး စာသင်ယူနေတယ်ကြားရလို့ အရမ်းဘဲ ၀မ်းသာ အားကျမိတယ်…
ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ မတ်ဆုမိုတိုစံကလည်း ဆရာ့လိုဘဲ ဆရာတစ်ယောက်ပါ.. ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်က ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘဲ… အင်္ဂလိပ်စာ သင်တဲ့ ဂျပန် အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ပါ… နောက်လ ဂျပန်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကပွဲ ရှိတယ်.. မတ်ဆုမိုတို ဆန်းဆေးရဲ့ကျောင်းက ကလေးခြောက်ယောက်… မြန်မာ လေးယောက် မြနန္ဒာ သီချင်းနဲ့ ကကြမယ်… ပြီးတော့ ပြဇာတ်လေးလည်းရှိတယ်… သောကြာနေ့က အီရှိဘရှိဆန်းဆေးက ဒီအပတ်.. စနေ ရော တနင်္ဂနွေရော လဘ်လာပြီး ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာ ကိုအဖြေ၇ှာထား… ဒါမှ တနင်္လာနေ့experiement လုပ်လို့ရမယ်လို့ ပြောတော့ စိတ်ညစ်နေခဲ့တာ… ဒီနေ့မနက် လဘ်ရောက်တော့ တူတူတွဲ ပြီး အဖြေရှာမယ့်မာစတာကျောင်းသားက မေးလ်ပို့ထားတယ်.. သူဒီနေ့မလာနိုင်ပါ… မနက်ဖြန်တစ်နေကုန်လာပါ့မယ်ဆိုတော့ အကတိုက်တဲ့ နေရာ သွားဖြစ်ခဲ့တယ်… နာဂိုယာတက္ကသိုလ်ရှေ့မှာ မတ်ဆုမိုတိုစံက မြန်မာတွေ အားလုံးကို ကားနဲ့လာကြိုပေးတယ်… ပျော်ရွှင်စွာ အကတိုက်ပြီး… မြန်မာထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတယ်.. ကြက်သားနဲ့ အာလူးဟင်းလေ…. တုံ့ယမ်းဟင်းချိုလည်းပါတယ်… ပြီးတော့ ဒီနေ့ ခံစားချက်ကို ရေးပေးရတယ်…
ပျော်ရွှင်ပါတယ်.. ဟင်းကလည်း အရသာရှိပါတယ် ပေါ့
နေ့တိုင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုတို့လုပ်နေတဲ့ experiment လို အမှတ်ပေးရရင်တော့ နံပါတ် ၅ပါ… ခံစားချက်ကောင်းသည်…း)… နောက်တစ်ခုက တတိယနှစ်တုန်းက ဆရာမ နဲ့ပြန်တွေ့လို့ အရမ်းဝမ်းသာခဲ့တယ်… တီချယ်က သမီး သမီးလို့ခေါ်ပြီး စကားပြော… ကိုယ့်ကိုလည်း တွေ့တာနဲ့ မှတ်မိနေခဲ့တာ … ဂျပန်စကား မရဘူးတီချယ် ဆိုတော့ စကားရအောင်သင်နော် သမီးတဲ့… တီချယ်လည်း ကိုယ့်လို အဖြစ်တူ.. တီချယ်ရောက်စတုန်းကလည်း ညနေ ၆ နာရီလောက်ဆို ပြန်မိတော့ ဆရာက ကြိုက်ဘူးတဲ့… ခုတော့ ည ၉ နာရီ ၁၀ နာရီမှ လဘ်က ပုံမှန်ပြန်တယ်တဲ့… လဘ်က ဆရာလည်း အဲလိုဘဲတီချယ်ရယ် သူပြန်ပြီး မှ ပြန်မှ ကြိုက်တာ လို့ တီချယ်ကို ရင်ဖွင့်မိတယ်… ကြုံတုန်းပြောရရင်တော့ ဂျပန်မှာ ဆရာ ၃ မျိုးရှိတယ်… ပထမတစ်မျိုးက သဘောကောင်းတဲ့ ဆရာပေါ့… သူက တပည့်တွေ နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေ… လိုတာတွေ အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေး.. ဥပမာ.. ဘေးခန်းက မွန်ဂို သူငယ်ချင်းရဲ့ဆရာ… ရောက်တာနဲ့ ဘာလိုလဲမေးပြီး ipad, laptop, စက်ဘီးက အစ ပေးပါတယ်.. သူငယ်ချင်းလည်း စကော်လာဘဲ.. ဒါပေမယ့် ဆရာက သဘောကောင်းစွာ part time အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသေးသည်… အခု တိုကျိုသွားချင်သည် ဆိုတော့ လစဉ် သူတို့လဘ်က တိုကျိုမှာ အလှည့်ကျ တက်ရတဲ့ seminar တစ်ခုကို ဒီလ သူငယ်ချင်းကို ထည့်ပေးသည်… နောက်ဆရာက က လဘ်လာရင် မုန့်တွေဝယ်လာတတ်သည်… သူတို့လဘ်မှာ မုန့်တွေထားတဲ့နေရာ ရှိတယ်.. ကုန်နေပြီဆို ဆရာက ဟာ မုန့်တောင်ကုန်နေပြီဘဲ ဆိုပြီး နောက်နေ့ ၀ယ်လာပေးတတ်တဲ့ဆရာမျိုးပါ….
နောက်ဆရာ တစ်မျိုးကတော့ အလုပ်တစ်ခုပြီးဖို့ ၂ ပတ် အချိန်ပေးထားရင် ၂ ပတ်ပြည့်သွားမှ သွားတွေ့ရတဲ့ ဆရာမျိုး… သိပ်လည်း အားလေ့မရှိ… အပြင်စီးပွားရေးတွေရှိမည်… သူကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ research ရှိမည်… သူ့ရုံးခန်းထဲမှာသာ နေတာများမည်.. ကျောင်းသားတွေ လဘ်ထဲလာလေ့မရှိ… ခေါ်ချင်ရင် မေးလ်ပို့ထားမည်… အပတ်စဉ်လုပ်တဲ့ seminar မျိုးတွေမှာတော့ သေချာဆွေးနွေးရတဲ့ ဆရာမျိုးး ဒါက ပုံမှန်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဆရာမျိုး
နောက်ဆရာ တစ်မျိုးကတော့ အီရှိဘရှိဆန်းဆေးလို ဆရာမျိုးဖြစ်သည်… ကျောင်းသားတွေက တကယ့် ဂျပန်အစစ်တွေရဲ့ ရှေးကျတဲ့ စရိုက်လို့ပြောတာပေါ့… ဂျပန်ကျောင်းသားတွေ ကိုယ်တိုင် ဆရာက တင်းကျပ်လွန်းတယ်လို့ပြောကြတယ်…
ဆရာ အားရင် အားသလို လဘ်ထဲလာတယ်.. .ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေလဲ မော်နီတာတွေကြည့်မယ်… ဘယ်သူကို ဘာတွေခိုင်းရမလဲ… တကယ်တော့လည်း စာတွေဘဲခိုင်းနေတာမို့ ပညာတော့ရသည်… ဒါပေမယ့် ဆရာက အမှားသေးသေးလေးပင်လျှင်ဆူတတ်သည်.. တူညီတဲ့ အမှားမျိုးကို နှစ်ခါမှားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ သုတေသနကို ဆက်လုပ်နေဖို့တောင် မထိုက်တန်တဲ့ ပုံစံမျိုးပြောတတ်သည်… တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က ဒီကိစ္စရဲ့ အမှားဟာဒါကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါလို့ပြောရင် ဆရာလက်မခံ… probability သဘောတရားတွေပါလာမည်… ရှုပ်ထွေးသော သင်္ချာ သဘောတရားများပြောကာ ထိုအမှားလေးအတွက် အချိန်ပေါင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လုပ်ရဖို့သာ ပြင်ထားရုံ … မိန်းကလေး ဖြစ်နေလို့ နည်းနည်းတော်သေးတာ.. ယောက်ကျားလေးတွေ ဆူရင်တော့ ဆရာက ခုံတွေဘာတွေပါ တ၀ုန်းဝုန်းရိုက်ပြီး အော်ဟစ်တတ်သူုဖြစ်သည်… သူဆူတာနှင့်ကင်းဘူးသော သူမရှိ များများဆူခံရသူနှင့် နည်းနည်းဆူခံရသူသာ ကွာမည်… ဒါပေမယ့် စိတ်ညစ်နေရုံနဲလည်းမပြီး ကြိုးစားပြီး လျှေက်ရမည်သာ ဖြစ်သည်.. ခုချိန်သူအများကြီး သင်ပေးနေတယ်လို့ သဘောထားကာ ကြိုးစားမှ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိတယ်… မေးလ်ပို့တာက အစ သင်ပေးပါတယ်..တစ်ခါတစ်လေ သူမော်နီတာ လာကြည့်တုန်း မေးလ်ပို့နေရင် နင်ရေးတာ မှားနေပြီ… နင်အဓိက ပြောချင်တာ အောက်မှာရောက်နေတယ်.. အဓိက သူ့ကိုပြောချင်တဲ့ စာကြောင်းကို အရင်ဆုံးရေးရမယ် ဟုပြောကာ သင်ပေးသူဖြစ်သည်… အဲတော့လည်း ဆူတတ်တာ သူ့ဝသီမို့ ကြိုးစားပြီး သင်ယူရုံသာဖြစ်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီလို အတွေးဆိုတာလည်း ဒီလိုခံစားချက်ကောင်းတဲ့ နေ့မျိုးလေးလောက်ဘဲ တွေးနိုင်တာလားနော်… နေ့တော်တော်များများက ငါစိတ်အရမ်းပင်ပန်းတယ်… အတူတွဲလုပ်နေသောသူများကလည်း သူတို့ပြောတာ ကိုယ်က နားမလည် ကိုယ်ပြောတာလည်း သူတို့ နားမလည်.. ပင်ပန်းတယ် လို့တွေးမိတဲ့နေ့က များသားလား…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ အဖို့ နာဂိုယာ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီကတော့ သူငယ်ချင်းများ နဲ့တွေ့ရ… ရယ်မောရ… ဟင်းကောင်းကောင်းစားရသည့် အတွက် ပျော်ရွှင်နွေးထွေးခြင်းများဖြင့် လှပသည်း)
Posted by Mya at 9:09 AM No comments:
အိမ်ပြန်ချင်နဲ့စိတ်ကြောင့်ထင်တယ်... ခုတစ်လော အိမ်ကိုခဏခဏ အိပ်မက်မက်တယ်...
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က စပြီးအိမ်မှာ ကောင်းကောင်းမနေရဘူး... မာစတာသီးစစ် တုန်းကတော့ အိမ်မှာကောင်းကောင်းမနေရ... အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အချိန်လည်း အိမ်ကိုဒုက္ခပေးနေတာ အများသားလားနော်... အိမ်က မေမေ ဆိုတာ ငွေကြေးလည်းထောက်ပံ့ရ... မအောင်မြင်တဲ့ ပထမအကြိမ် third seminar အတွက် တစ်ငိုငို ဖြစ်နေသေးဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာလည်း အားပေးရ... နောက်တော့ camp ထဲလည်းရောက်သွားရော... အိမ်ကလူတွေခဏတော့ နားအေးသက်သာမယ်ထင်တယ်.... camp ထဲရောက်တော့ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ စတော့တာဘဲနော်... စာမေးပွဲဖြေခါနီး ချောင်းတွေဆိုးနေမကောင်းဖြစ်တော့ အားတွေငယ်ပြီး မေမေ့လှမ်းဖုန်းဆက်... ပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြိး ငိုလိုက်ရတာ... ခုတော့ အဲဒါတွေကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လေ... အရင်က စနေနေ့မနက် အိမ်ပြန်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ မျက်နှာတောင် မသစ်ဘူး... ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆို... အဆောင်အောက်ဆင်း ကားဌားပြီး အိမ်ပြန်... စနေတနင်္ဂနွေ မေမေချက်ကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေ စား စာထိုင်လုပ်.. အမေကို ကူညီတယ်ဆိုတာရှားသားလားနော်... ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲက တစ်ခါတစ်လေ အိပ်မက်တွေမက်သား... ညဘက်ကြီး အိမ်ပြန်လာတာတဲ့...အိပ်မက်ထဲမှာ... မီးတွေပျက်နေတာမှ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတော့တာဘဲ... အိမ်ပြန်လာတဲ့ လမ်းကြီးက ရှည်လိုက်တာ... ကားတွေလည်းမှားစီးသေးတယ်.... ရောက်လာတော့လည်း တစ်ရပ်ကွက်လုံး ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်လို့လေ... နောက်တော့ ကြိုးစားပြီး လျှောက်လာရင်း လေးထပ်က တိုက်ခန်းလေးဆီ မော့ကြည့်တော့ ဖယောင်းတိုင်မီးလေး လင်းနေတယ်... မေမေရှိနေမှာ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အပြေးလေးတက်လာတာ... လှေကားက အရမ်းမှောင်တော့ ကြောက်နေမိတယ်.... လှေကားတွေက ကြာလိုက်တာတက်ရတာ... နောက်တော့ လှေကားကိုတက်ရင်းနဲ့ ဘဲ အိပ်မက်ကနိုးလာရော... ခုလည်း တစ်ခါတစ်လေ နာဂိုယာ ဆေးရုံရှေ့က မှောင်နေတဲ့လမ်းကနေ ညဘက်တွေ တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာမိတဲ့ အချိန်တိုင်း အဲလို အိပ်မက်တွေ ကို သတိရမိတယ်... အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့ စိတ်က အရမ်းပါဘဲ.. အရင်က စနေနေ့မနက် အိမ်ပြန်ချင်လို့ မနက်အစောကြီးတွေ ထပြန်လာရင်မေမေက တံခါးဖွင့်ပြီးစောင့်နေ... ဒီနေ့ဘာစားချင်လဲ... ရော့ပိုက်ဆံ.. စားချင်တာတွေချက်ပေးမယ်.. ဈေးတော့သွားပေးဦးနော်တဲ့.. တစ်ခါတစ်လေ.. ဆူဆူအောင့်အောင့်နဲ့ မေမေကလည်း လှေကားကြီးတက်ရတာ မောတဲ့ဟာကို ဈေးကသွားရဦးမယ် ဆိုပြီး ဆူဆူအောင့်အောင့်နဲ့... ခုတော့ ဈေးခြင်းလေးဆွဲပြီး ရန်ကင်းဈေးလမ်းလေး လျှောက်ချင်တယ်.. အခြောက်လိုလိုအသံချွဲချွဲနဲ့ ဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးဆီမှာ အသီးအရွက်တွေ ၀ယ်မယ်.. သူက အများကြီး အပိုပေးတယ်လေ... ချဉ်ပေါင်ရွက်ဝယ်ရင် ခြွေပြီးမှ အိမ်ပေါ်လာပို့ပေးတယ်... ဈေးဆောင်တွေထဲထိလျှောက်ရတာပျင်းလို့ အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း သစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ကြားက ပုစွန်သည်ကြီးဆီမှာ ပုစွန်ဝယ်မယ်... နောက်တစ်နှစ် နှစ်နှစ် သုံးနှစ် အားတင်းပြီးကျော်ဖြတ်ရဦးမယ်လေ.... ညနေက မေမေ့ဆီ ဖုန်းတစ်ကဒ်လုံးကုန်အောင်ဆက်ပစ်လိုက်တာပေါ့... မေမေက စာကြိုးစားနော်တဲ့... ဆရာနဲ့လည်းတည့်အောင်နေတဲ့.... မြန်မာတွေ ညံ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကြောင့် မဖြစ်စေနဲ့နော်တဲ့... ငါ့သမီးလေးကြိုးစားအောင်မြင်တယ်ဆိုမှ မေမေက လွမ်းရကျိုးနပ်မှာတဲ့... ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောရင်း နောက်သုံးနှစ်ကျော် မေမေ့ကို ဈေးဝယ်ပေးနိုင်မယ့် အချိန်လေး.... မေမေနဲ့ မီးဖိုထဲမှာ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်လေးကို မျှော်လင့်ရင်း....
Posted by Mya at 6:02 AM3comments:
နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ဟောင်းလေးထဲမှာ ကျွန်မနေထိုင်တယ်...
ပူပြင်း ခြောက်သွေ့ ပြီး အထီးကျန်ဆန်တဲ့ ခုနစ်လပိုင်း နွေရက်တစ်ရက်က နှင်းဆီပန်းတွေကိုတောင် မလှပစေနိုင်ခဲ့ဘူး...
ရက်စက်တဲ့ နဂါးရက်တစ်ရက် ကို ဟာတာတာ နှလုံးသားနဲ့ ကြိုးစားဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်....
မနက်ဖြန်ဟာ ကျွန်မ အတွက် ပျော်ရွှင်နွေးထွေးစွာ ကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ နေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ..
မနက်ဖြန်ရဲ့ ညများဟာလည်း ပီတိပြုံးနဲ့ အိပ်စက်ရတဲ့ ညများဖြစ်ပါစေ...
ဒါ ခုနှစ်လပိုင်းပူပြင်းတဲ့ နွေစနေတစ်ရက်ကရေးထားတာပေါ့... ခုမှသတိရလို့ ပြန်တင်လိုက်တာ... အဲဒီနေ့ မနက် ၉ နာရီလောက် အိပ်ယာကနိုးတော့ လဘ်က ဖုန်းဝင်လာတယ်.. လဘ်က ကျုတာဆီက.. ခုဘယ်မှာလဲ အဆောင်မှာဆိုတော့ အခုဆရာလည်းလဘ်မှာရှိတယ်... ဒီနေ့ လုပ်ပြီး ချက်ခြင်း ဆရာ့ကို report ပြန်တင်ရမှာရှိနေတယ် ခုလာခဲ့ပါတဲ့... ဒါနဲ့ကျောင်းသွား... စိပ်ပုပ်တဲ့စီနီယာ ကျုတာ ရဲ့ကျောတောတောသင်ပြမှုကိုနာယူရင်း စိတ်နှလုံးမသာယာစွာရှိနေခဲ့တာ ဘာမှလည်းမစားရသေးလို့ဗိုက်ကလည်းဆာ... စနေနေ့ဆိုပြီးအားရပါးရအိပ်မိတာကိုး... ၁၁ လောက် experiment လုပ်တဲ့အခနးမှာ စမ်းလို့ပြီးတော့ ဆရာ့ကိုသူ့ရုံးခန်းမှာ သွားခေါ်ရတယ်... လဘ်ရှေ့ကလမ်းမှာ တစ်ခြားလဘ်တစ်ခုက ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေဖြစ်မယ်... အုပ်စုလိုက်ကြီး လမ်းမမှာ သူတို့လည်း စမ်းသပ်မှုတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ထင်တယ်.. ကင်မရာလေးတွေကို သစ်သားချောင်း အရှည်ခွဒေါက်ကြီးတွေတွဲထားတာတွေကို ကိုင်တဲ့သူကကိုင်... လမ်းမမှာပေကြိုးနဲ့တိုင်းတဲ့သူကတိုင်းလုပ်နေကြတယ်... အဲဒီနေ့နေ့လည်မှာကျောင်းမှာစာရင်းပေးထားတဲ့ ပန်းသင်တန်းရှိတယ်.. သင်တန်းက ၁ နာရီစမယ်... ညနေက လဘ်မှာ အိုဘီကိုင်းတဲ့... အိုဘီကိုင်းဆိုတာ.. ဒီလဘ်ကနေ ဘွဲ့ရသွားတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေ အခုလက်ရှိလဘ်မှာရှိတဲ့သူတွေ ပြန်စုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားကြ စားကြသောက်ကြ ပွဲမျိုးပေါ့... ယမ်း ၅၀၀၀ တောင်ထည့်ရတယ်.. နှမြောစရာကောင်းလိုက်တာ... သူတို့ အစီအစဉ်က ၂ နာရီမှာ ဘိုးလင်းပစ်ပြီး ကျောင်းမှာ ပြန်လာစားကြမယ်... အီခဲဘားနားသင်တန်းရှိလို့ မလိုက်လိုပါဆိုတော့ ဆရာက ဘိုးလင်းမပစ်ရင်နေ... သင်တန်းပြီးရင် စားသောက်ခန်းမလာခဲ့ပါတဲ့.... စမ်းသပ်မှုလုပ်ထားတာတွေ ဆရာကလိုတာတွေပြောပြီးတော့ ၁၂ ခွဲနေပြီ... လဘ်ကလူတွေရောက်လာပြီး ဘိုလင်းပစ်သွားဖို့လုပ်နေတုန်း မြန်မြန်ပြန်လာ.. ပန်းသင်တန်းက ၁ နာရီ.. ဘာမှစားစရာမရှိ..ကျောင်းနားက စတိုးဆိုင်အမြန်ပြေး ထမင်းဘူးဝယ်.. အဆောင်ပြန်လာ.. စားမယ်လုပ်တုန်း ဘေးခန်းက သူငယ်ချင်းက တံခါးခေါက် ပန်းသင်တန်းသွားမယ်တဲ့.. သွားနှင့်နော် လို့ပြောပီး ထမင်းလေး သုံးလေးလုပ် ပါးစပ်ထဲထည့် ပြေးသွားရတယ်... သင်တန်းရောက်တော့ လူစုံနေပြီ.. ရှေ့ဆုံးတစ်ခုံဘဲလွတ်နေတယ်.. နေကပူစိတ်ကညစ်... နှင်းဆီတွေတောင်မလှသလိုဘဲ.. ဆရာမက ဂျပန်လို အီခဲဘန အရေးပါမှုတွေကိုရှင်းပြနေတယ်... ခေါင်းထဲ ၀င်တစ်ချက် မ၀င်တစ်ချက်..တော်တော်များက နားမလည်... ပြီးတော့ အတန်းထဲက လူများက မေးခွန်းတွေမေး ဆရာမက ဖြေ... နားလည်တစ်ချက် မလည်တစ်ချက်... ညနေ အိုဘီကိုင်းရောက်တော့ ဆရာက စကားပြောနေပြီ.. ကံဆိုးချင်တော့ စကားပြောနေတဲ့ ဆရာ ရဲ့နောက်တည့်တည့်မှာသာ တံခါးပေါက်က ရှိနေတယ်... အဲဒါလည်းညံ့တာ.. နောက်ဘက်က၀င်လို့ရတဲ့ တံခါးကို မမြင်ဘူးလေ... ဆရာ့နောက် တံခါးပေါက်မှာ ပြူတစ်ပြူတစ် သွားချောင်းကြည့်တော့ စိတ်ပုပ်တဲ့ ကျူတာက လှမ်းပြီးမျက်လုံးပြူးပြတယ်.. နင်ဘာလို့နောက်ကျလဲပေါ့.. သူ့အမြင်ကပ်တာနဲ့ ခပ်တည်တည် တံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ လူတွေက ၀ိုင်းကြည့်... ဆရာတွေကပါလှည့်ကြည့်... နောက်ကိုသွက်သွက်လျှောက်သွားတော့ ကမ်းပိုက်လုပ်နေကြပြီ... လက်ထဲမှာဘာခွက်မှ မရှိ... ကောင်လေးတစ်ယောက်က အလိုက်တသိ... မြ..စံ ရေနွေးကြမ်းလားလို့ အလိုက်တသိမေး ခွက်ကလေးကမ်းပေး ရေနွေးကြမ်းဘူးကြီးထဲက ထည့်ပေးတယ်... ကျေးဇူးတင်ပါပေ့မောင်မင်းကြီးသားလေး အစားအသောက်တွေလည်းရောက်လာရော.. လူတွေက စားပွဲတွေနားဝိုင်းသွား... လဘ်မှာက ကောင်လေးတွေက များနေတာ... ကောင်မလေးက ကိုယ်ပါမှ ငါးယောက်... ကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ပါပေါင်းရင် မိန်းကလေးက ယောက်ကျားလေးရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ... ကျန်တဲ့ ဂျပန်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းဆာကေးတွေသောက်... တရုတ်နှစ်ယောက်ကလည်း ကွိကျိကွကျိတွေပြော.. အဆာလွန်နေလို့ထင် ဘာမှလည်းသိပ်မစားချင်... အရမ်းလည်းတိုးမနေချင်တာပါတယ်... ရေနွေးကြမ်းတွေဘဲလှိမ့်သောက်နေတာ.. အအေးဘူးတွေ တစ်လကြမ်းသူများတွေသောက်နေတာလည်း တွေ့တော့တွေ့သား သွားမယူုဖြစ်ဘူး... ခုံတစ်ခုံမှာထိုင်ပြီး သူများတွေရယ်နေတာကိုသာ ကြည့်နေမိတယ်... ည ၇ နာရီထိုးတော့ အသားလေးလစ်ပြန်ပြီး အထီးကျန်လွန်းလို့ ... တစ်နာရီလောက် မြေအောက်ရထားစီးပြီး သွားရတဲ့ နေရာက အစ်မ တစ်ယောက်ဆီဖုန်းဆက်.. သူ့ဆီသွားရတယ်... သူ့ဆီရောက်မှ သူနေတဲ့နားက တရုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွား နှစ်ယောက်သား ထမင်းစားကြ... အဲဒီတော့မှ စားလို့ဝင်တယ်.. စိတ်ညစ်လို့ မြန်မာ လိုစကားတွေ အကျယ်ကြီးပြောပြီး ပေါက်ကရတွေပြော ရယ်လိုက်တာပေါ့.... ရထားတစ်နာရီပြန်စီး ပြန်လာတော့ ည ၁၀ နာရီကျော်ပြီ... အိမ်ရောက်တော့ ကဗျာလေးထိုင်ရေး အားလုံးကိုမေ့ပစ် အိပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့... ခြောက်သွေ့ခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပေါ့.....
Posted by Mya at 7:34 AM2comments:
Enchanted to meet you!!!!
ဒါက owl city ရဲ့ Enchanted....
ဒါကတော့ Talyor Swift ရဲ့ Enchanted ပေါ့... ဒီသီချင်းလေးပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ The Vow ပါ... ကနေဒီယမ် မင်းသမီးချော Rachel McAdams နဲ့ Dear John ထဲက မင်းသား Channing Tatum တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်... Rachel McAdams ကိုတော့ The Notebook မှာစသတိထားမိတာပေါ့..
Posted by Mya at 5:16 AM No comments:
နာဂိုယာဒိုင်ယာရီ (၂) ဒီနေ့တော့ နာဂိုယာပာာ ဆောင်းတ...
ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့လေးတွေ...(၂)
သူတို့ပြောတဲ့ ရှင်းနန်းကိုင်းသွားတယ်...သိပ်ေ နာက်ကျတဲ့ ရှင်းနန်းကိုင်းဘဲကွယ်... ဇန်န၀ါရီလတောင်ကုန်တော့မှာကိုး. .. အီကဲဘန အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရှင်း...
အိမ်ပြန်ချင်နဲ့စိတ်ကြောင့်ထင်တယ်... ခုတစ်လော အိမ်ကိုခဏခဏ အိပ်မက်မက်တယ်... လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က စပြီးအိမ်မှာ ကောင်းကောင်းမနေရဘူး... မာစတ...
အဖေကြီးဟာ ရွာမှာလယ်လုပ်ရင်းနဲ့ Burmese Independence Army (BIA) ထဲဝင်ခဲ့တယ်… လယ်သမားအဖေကြီးရဲ့ လယ်သမားဘ၀ သင်္ကေတကတော့ ဘယ်ဘက်လက် လက်ညှိုးက တစ်ဆ...
ဒီနေ့တော့ နောက်ထပ် မတ်ဆုမိုတိုစံ နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်… ဘ၀မှာ ပထမသိရတဲ့ မတ်ဆုမိုတိုစံ က ကျောင်းကလုပ်တဲ့ conference ကိုလာတတ်တဲ့ tokyo, ...
ငယ်ငယ်လေးတည်းက သူများတွေက အဘိုးနဲ့အဘွားဘယ်သူ့ချစ်လဲဆိုရင် အဘွားချစ်တယ်လို့ အမြဲဖြေခဲ့တာ..အဘွားက အမြဲအလိုလိုက်အလျော့ပေးပြီး အဘိုးက တော့ စ...
နာဂိုယာမှာ ချဉ်ပေါင်ရွက်မရှိပါ.. တစ်ချို့တွေ အိမ်မှာစိုက်ထားတာရှိတယ်လို့တော့ ကြားသား.. ဘယ်နေရာမှန်းအတိမကျမသိပါ.. ချဉ်ပေါင်ရွက်ကျော်တမ်းတ...
နာဂိုယာဒိုင်ယာရီ (၂) ဒီနေ့တော့ နာဂိုယာပာာ ဆောင်းတွင်းမို့ အေးစက်စက်ပေမယ့် လေမတိုက်နေလို့ နေလို့ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ... ၂၀၁၆ နှစ်သစ်စတည်း...
ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့လေးတွေ...
မြို့လေးတွေအားလုံးကတော့…ချစ်စရာကောင်းကြတယ်…..အဲဒီဒေသတွေမှာ..မဖွံ့ဖြိုးသေးတာ..နည်းပညာနောက်ကျနေတာတွေလည်း…ရှိတာပေါ့…. ဒါပေမယ့်..မြို့ပြမှာ.. ရှ...
နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ဟောင်း နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ဟောင်းလေးထဲမှာ ကျွန်မနေထိုင်တယ်... ပူပြင်း ခြောက်သွေ့ ပြီး အထီးကျန်ဆန်တဲ့ ခုနစ်လပိုင်း နွေရ...